Imlolile ikhempu ka-Under 23 oweChiefs - Impempe
Imlolile ikhempu ka-Under 23 oweChiefs
Ubuye ekhempini yeqembu lesizwe labafana abaneminyaka engaphansi kuka-23 eselolekile uNkosingiphile Ngcobo weKaizer Chiefs, esekufuna ngayo yonke indlela ukungena eqenjini elizoya kuma-Olympics eJapan ngoJulayi.
UNgcobo, nozakwabo oNjabulo Blom noReeve Frosler bangabanye babadlali umqeqeshi waleli qembu, uDavid Notoane abebaqokile ukuthi babe sekhempini ebiseThekwini ngesikhathi sekhefu lemidlalo yamazwe ngamazwe.
Inhloso kaNotoane ngale khempu bekuwukubheka abadlali angase abaqoke uma esekhetha iqembu azohlasela ngalo eBeining njengoba esencishelwe yisikhathi nje.
UNgcobo ubuye ejabule ngabakwenzile kule khempu, ethu Uzobona enethuba elihle lokuba ngomunye wabazothathwa uma sekuyiwa eJapan.
“Bengiseqenjini lesizwe lika-Under 23 futhi ngikuthokozele kakhulu ukuba sekhempini nozakwethu,” kusho uNgcobo ebuzwa ngabekwenza njengoba bekusamiwe emidlalweni yamaqembu.
“Kungikhuthazile lokhu ngoba kungibonise nokuthi nginalo ithuba lokuyodlala kuma-Olympics (ngo-2022) yinqobo nje uma ngingeke ngiyeke ukusebenza ngokuzikhandla,” kusho uNgcobo.
UNgcobo, oneminyaka engu-20, usephenduke injini yeqembu likaGavin Hunt eNaturena njengoba kunguye okubhekwe ukuba aqale iminyakazo yokuhlasela kuMakhosi.
Wumsebenzi asawenza kahle lona, futhi ikusasa lakhe ebholeni libukeka liqhakazile uma ezoqhubeka nokuzinikela, azimisele. Uthe uyalijabulela ithuba alitholayo eqenjini futhi uyakhula njalo nje.
“Ngiyafunda futhi ngiyakhula umdlalo nomdlalo. Sengidinga nje ukuqhubeka nokuzinikela bese ngizilolonga kulokhu okuncane engishoda ngakho, ngiphinde ngiqinise kwengikwenza kahle ukuze ngikwazi ukusiza iqembu ngaso sonke isikhathi,” kusho lo mfana waseMgungundlovu.
Previous Previous post: Kube wumuzwa wentokozo uFrosler ethola indondo okokuqala
Next Next post: UMagala uthi ukulungele ukudlalela amaProteas